I-Donald Trump Business Bankruptcies - Uluhlu kunye nezizathu
Imiba Urhulumente waseMelika
Kutheni amaNkampani kaDonald Trump alahlekile
Iinkcukacha malunga ne-6 Donald Trump Corporate Bankruptcies
U-Donald Trump uye wazibonakalisa njengomntu oshishino ophumelelayo oye wahlawulela inzuzo eyi-10 billion . Kodwa uye wabangela ezinye zeenkampani zakhe ukuba zifake i-bankruptcy, iqondisa ukuba zenzelwe ukulungiswa kwetyala labo elikhulu.
Abagxeki baye bacacisa iNgxowa-mali yeTrump njengemizekelo yokungabikho kwakhe nokungazinzanga ukulawula, kodwa umninimzi we-real-estate, umqhubi we-casino kunye nenye yangaphambili-inkwenkwezi ye-TV ithi ukusetyenziswa kwakhe komthetho wasemthethweni ukukhusela iimfuno zakhe kubonisa i-acumen yakhe ebalulekileyo.
"Ndiyisebenzise imithetho yeli lizwe njengabantu abakhulu kakhulu obafunda ngalo lonke usuku kwi-shishini baye basebenzisa imithetho yeli lizwe, isahluko somthetho, ukwenza umsebenzi omkhulu kwinkampani yam, abasebenzi bam, kunye nam nosapho , "UTrump uthe ngo-Agasti 2015.
I-New York Times, eyenze ukuhlaziywa kweengxelo zokulawula, iirekhodi zeenkundla kunye nokukhutshwa kwezokhuseleko, kufumaneka ngenye indlela, nangona kunjalo. Ingxelo ngo-2016 ithi iTrump "ibeke imali encinci yemali yayo, ihlawulwe amatyala e-casinos kwaye iqokele izigidi zeedola ngomvuzo, ibhonasi kunye nezinye iintlawulo."
"Umthwalo weentsilelo zakhe," ngokutsho kwiphephandaba, "yawela kubatyalomali nakwabanye ababebethe kwi-acumen yakhe yezoshishino."
6 Iingxakalisi zeNkampani
Ixilongo lifake iSahluko 11 sokutshatyalaliswa kwiinkampani zakhe ezithandathu. Iingqungquthela ezintathu zekhasino zafika ngexesha lokunciphisa kweeminyaka yama-1990 kunye ne- Gulf War , zombini ezo zanceda kumaxesha amanzima kwi-Atlantic City, kwiindawo zokugembula zaseNew Jersey. Kwakhona wangena kwihotele yaseManhattan kunye neenkampani ezinokubambisa i-casino.
Isahluko 11 sokuchithwa kwemali sivumela iinkampani ukuba zilungiswe okanye zihluthele ezinye iikweletu kwezinye iikhampani, ababolekisi kunye nabanini-zimali ngelixa behlala kwishishini kodwa phantsi kolawulo lwenkundla yebhanki. Isahluko 11 sisoloko sabizwa ngokuthi "ukulungiswa kwakhona" kuba kuvumela ukuba ishishini livelise kwinkqubo ephumelelayo nangendlela efanelekileyo kunye nababolekisi.
Elinye iphuzu lokucacisa: I-Trump ayizange ifake i-bankruptcy, i-bankruptcy efana neefowuni zayo e-Atlantic City. "Andizange ndihambe," uTragump uthe.
Nantsi ukukhangela kwi-Six Trump bankruptcies. Iinkcukacha ziyimpembelelo yoluntu kwaye ziye zapapashwa ngokubanzi ngamajelo endaba kwaye zixutyushwa ngumongameli ngokwakhe.
Ngo-1991: iTump Taj Mahal
I-Trump Taj Mahal yafunwa ukukhusela i-bankruptcy ngo-1991. Craig Allen / Getty Izithombe
I-Trump yavula i-$ 1.2 billion i-Taj Mahal Casino Resort kwi-Atlantic City ngo-Apreli 1990. Ngomnye emva koko, ehlotyeni ka-1991, yafuna ukukhuselwa kweSahluko 11 ngenxa yokuba ayikwazanga ukuvelisa imali eyaneleyo yengcakazo ukuze ihlawule iindleko ezinkulu zokwakha isibonelelo , ngokukodwa phakathi kwemali.
Ixilongo laphoqeleka ukuba liyeke umyinge wobunini kwi-casino kwaye ithengise i-yacht yakhe kunye ne-airline yayo. Abanini bembopheleleko banikezelwa iintlawulo ezenzelwe phantsi.
I-Trump yaTaj Mahal yachazwa njengesizathu sesibhozo sehlabathi kunye ne-casino enkulu emhlabeni. I-casino ijikeleze ii-4.2 zezigidi zeenyawo zeenyawo kwiihektare eziyi-17 zomhlaba. Imisebenzi yayo kuthiwa yayingenakunikwa imali yengeniso ye-Trump's Plaza kunye neekheninati zeNqaba.
"Inqweno yakho ngumyalelo wethu. ... Inqweno yethu kukuba amava akho apha azaliswe ngumlingo kunye nobuqili," abasebenzi bezhenketho abathembise ngelo xesha. Abantu abangaphezu kwama-60,000 ngosuku bavakashela iTaj Mahal kwiintsuku zokuqala.
I-Taj Mahal yavela kwi-bankruptcy kwiiveki zokuhamba kwayo kodwa yavalwa emva koko.
1992: iTump Castle Hotel neCasino
Lo ngumbhede 'kwi-High Rollers Suite' kwiTump's Castle Casino eAlantic City, eNew Jersey. Leif Skoogfors / Getty Izithombe Umxhasi
I-Castle Hotel neCasino zangena kwi-bankruptcy ngo-Matshi 1992 kwaye yayinzima kakhulu kwiipropati zeTranstiki zase-Atlantic ezifake iindleko zokusebenza. I-Trump Organisation yashiya isigxina sokubamba kwayo kwiNqabeni kubanini-mboleko. I-Trump yavula i-Castle ngo-1985. I-casino ihlala isebenza phantsi kobunini obutsha kunye negama elitsha, i-Golden Nugget.
1992: iTump Plaza Casino
Ihotela leTrint Plaza neCasino lifake i-bankruptcy ngo-Matshi 1992. Craig Allen / Getty Izithombe
I-Plaza Casino yayingenye yee-casinos ezimbini kwi-Atlantic City ukungena kwi-bankrupt ngo-Matshi 1992. Enye leyo yayiyi-Castle Hotel neCasino. Ibali elingama-39, i-Plaza ye-612 evulekileyo kwi-Atlantic City ehamba ngo-Meyi 1984 emva kokuba uTrump ibambe iqhinga lokukwakha ikhasino kunye nokuzonwabisa kweHarrah. I-Trump Plaza ivaliwe ngoSeptemba 2014, ibeka abantu abangaphezu kwe-1 000 emsebenzini.
1992: iTump Plaza Hotel
Ihotele yaseTrint Plaza eManhattan yafuna ukukhusela i-bankruptcy ngo-1992, malunga neminyaka emine emva kokuba uDonald Trump ayithenge. Paweł Marynowski / Wikimedia Commons
I-Trump's Plaza Hotel yayingaphezulu kweedola ezi-550 yezigidi kwi-matyala xa ingena kwiSahluko 11 sokuchithwa ngo-1992. I-Trump yanikezela i-49% yengeniso kwinkampani kubabolekisi, kunye nomvuzo wakhe kunye nenxaxheba yakhe yemihla ngemihla kwimisebenzi yayo.
Ihotele, ebhekiselele iPark Park eManhattan ukusuka kwindawo yayo kwiFifth Avenue, yangena kwi-bankruptcy ngenxa yokuba ayikwazi ukuhlawula iintlawulo zenkonzo zentlawulo zonyaka. UTump uthe wathengela ihotele malunga neerandi ezingama-407 ngonyaka ka-1988. Kamva wathengisa isigxina esilawulayo kwipropati, ehlala isebenza.
2004: IiRhotel zeTrump Hotels & Casino Resorts
I-Trump Marina e-Atlantic City, eNew Jersey. Craig Allen / Getty Izithombe
I-Trump Hotels & Casino Resorts, inkampani ebambeleleyo yee-casino ezintathu zeTram, zangena kwiSahluko 11 ngoNovemba 2004 njengenxalenye yokujongana nabanini-mboleko ukuba bahlaziywe i-$ 1.8 billion yezikwere.
Ngaphambili ngaloo nyaka, inkampani yokubamba yathumela ukulahlekelwa kwekota yokuqala yeeRandi ezingama-48, iphindwe kabini ilahleko zayo kwikota enye yangaphambili. Inkampani ithi ukugembula kwayo kuthatha phantse iidola ezigidi ezili-11 kuzo zonke iicasino ezintathu.
Inkampani ebambe iqela ivela kwi-bankruptcy ngaphantsi konyaka, ngo-Meyi 2005, ngegama elitsha: iTrump Entertainment Resorts Inc. Ukulungiswa kwetyala leSahluko 11 kuncitshiswe ityala lenkampani malunga neerandi ezingama-600 kunye nokunciphisa intlawulo yenzalo eyi-$ 102 yezigidi ngonyaka. I-Trump yayeka ukulawulwa kwabaninzi kubanini-nkonzo kwaye yayeka isihloko sayo segosa elilawulayo, ngokutsho kweThe Press ye-Atlantic City iphephandaba.
2009: iTump Entertainment Resorts
UDonald Trump uhamba kwi-helicopter yakhe ukujonga ezinye zeepropati zakhe eNew York City naseNew Jersey. UJoe McNally / Getty Izithombe
I-Trump Indawo yokuzonwabisa, i-casino ebambe inkampani, yangena kwiSahluko 11 ngoFebhuwari 2009 phakathi kweNkundla ePhambili. Ii-casinos zesiXeko saseAtlantic ziye zaphazamisa, ngenxa yeengxelo ezipapashwe, ngenxa yokhuphiswano olutsha ukusuka kwinqanaba likaRhulumente ePennsylvania, apho kwakukho oomatshini bendawo abatyelele kwi-intanethi kwaye babedlala ingcakazo.
Inkampani ebambe iqela ivela kwi-bankruptcy ngoFebruwari 2016 ibe yinkxaso-mali yeCarl Icahn's Icahn Enterprises. U-Icahn wathatha iTaj Mahal waza wayithengisa ngo-2017 kwi-Hard Rock International, eyathi yayiyikulungiselela ukulungiswa, ukubuyisela kwakhona, nokuvula kwakhona ipropati ngo-2018.
I-Shrimp Treadmill Isifundo Esihlawulwa Ngomvuzo Wentlawulo
I-Federal Federals neeDates zase-US
UMongameli kaMongameli 101: I-Theory Executive Management Theory kunye noMongameli kaMongameli
Inombolo yeRekhodi yabaPhezulu ukufumana imisebenzi kaRhulumente
Bio we-Vice kaMongameli uMike Pence
Yintoni Imali Ebumnyama?
Uncedo lwexeshana kwiintsapho ezihluphekileyo (TANF)
I-Makeup Political of Congress
I-US Census Bureau
AmaRiphablikhi ahanjiswe ukusika abasebenzi baseburhulumenteni
Imiyalelo yoLawulo lweDonald Trump
Abantu baseMelika bafumana i-Taller, Bigger, Fatter, ithi CDC
UThixo waseYiputa waseThoth
Cannibals kwiGreek Mythology
Ziziphi ii-Upanishads kwi-Indifi Philosophy?
Iindlela ezi-5 zokukhawula i-Clutter kubhala
Ukukhubaza (okanye Ukunika amandla) i-Java Plugin kwiSiphequluli
Ukukhupha isisu kwiMfuno
Iingcaphuphu zengqondo zePat Robertson
Yandisa abaninzi abakhubazekileyo, Abafundi abaPhuphile
Ukuqonda i-Commercial Granite
Iimviwo zeSatifikethi seNgcaciso zinganceda njani umsi-Qala umsebenzi wakho
Yintoni ekubonelelwa ngayo kwiNkcazo yezoQoqosho?
Iimfazwe ze-Gallic Caesar
I-ESL Quiz: Ukulinganisa kwiMidlalo
Nokian Hakkapeliitta 7 I-Studded Tire Review
Yazi U-Tamela Mann
Ukuchaza iMigaqo yeGalofu Ixeshana 'I-Round Round'
U-Marilyn Monroe Uvuma Ukuzalwa Okumnandi kuJFK
Ukubhiyozela uLitha nabantwana
Iinqununu ezili-10 ezidumileyo kwilizwe laMandulo
I-10 Best Men's Freestyle Snowboards
AmaRekhodi e-World Meter ama-200
Indlela yokukhusela ifa kwiJava Ukusebenzisa igama eliphambili lokugqibela